Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Sidina amin'ny Flyr sy Vueling avy any Milan Bergamo izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao farany Italia • Vaovao • Vaovao Mafana Norvezy • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Milan Bergamo dia nanambara ny fanampian'ny mpiara-miombon'antoka fiaramanidina vaovao ho an'ny Winter 21/22, manamafy ny fahatongavan'i Flyr sy Vueling amin'ny volana ho avy.
Nanomboka tamin'ny volana Jona niaraka tamin'ny sidina anatiny, ny orinasam-panombohana norveziana Flyr dia nampiditra an'i Milan Bergamo ho isan'ireo làlam-pifandraisana iraisam-pirenena voalohany.
Manamafy ny fifandraisan'i Milan Bergamo, ny LCC Vueling Espaniola dia hanomboka hifandray amin'i Paris Orly manomboka amin'ny 2 Novambra.
Flyr dia hanomboka serivisy indroa isan-kerinandro any Oslo, Norvezy manomboka amin'ny 5 Janoary 2022.
Ity herinandro ity Seranam-piaramanidina Milan Bergamo dia nanambara ny fanampian'ny mpiara-miombon'antoka fiaramanidina vaovao roa izay hiditra amin'ny seranam-piaramanidina mandritra ny W21 / 22. Raha nahatratra dimy ny mpitatitra nandray ny antso an-tsarimihetsika Lombardy tamin'ity taona ity, ny seranam-piaramanidina dia nanamafy ny fahatongavan'i Flyr sy Vueling tao anatin'ny volana vitsivitsy.
Manomboka amin'ny volana Jona miaraka amin'ny sidina anatiny, kaompaniam-piaramanidina Norvezy Flyr dia nampiditra Milan Bergamo anisan'ny voalohany amin'ireo zotram-piainany iraisam-pirenena. Manokatra làlana vaovao mankany amin'ny faritry Lombardy, ny mpitatitra mora vidy (LCC) dia hanomboka serivisy indroa isan-kerinandro any amin'ny tobiny any Oslo ny 5 Janoary 2022. Manatevin-daharana ny fifandraisana misy eo amin'ny seranam-piaramanidina amin'i Sandefjord Torp, FlyrNy rohy mivantana mankany Oslo dia midika fa ny seranam-piaramanidina Italiana dia hanolotra seza 756 isan-kerinandro ho an'i Norvezy mandritra ny ririnina.
Fanamafisana bebe kokoa Milan Bergamony fifandraisana, LCC Espaniôla Lingus hanomboka ny fifandraisana amin'i Paris Orly amin'ny 2 Novambra. Manangana fiasa intelo isan-kerinandro ny zotram-piaramanidina IAG Group avy ao amin'ny renivohitra frantsay dia hampiroborobo ny tambajotram-piaramanidina efa matanjaka mankany Frantsa. Manolotra seza 5,190 isan-kerinandro ho an'ny firenena eropeana Andrefana, LingusNy rohy mankany Paris Orly dia lasa làlana fahafito any Frantsa Bergamo, miditra ao Bordeaux, Marseille, Paris Beauvais, Paris Charles de Gaulle, Tarbes-Lourdes ary Toulouse.
Raha nilaza ny heviny momba ny fanambaràna vaovao momba ny sidina sy ny toerana vaovao, Giacomo Cattaneo, talen'ny sidina avaratry ny varotra, SACBO dia nilaza hoe: tambajotra sy fanekena ny fahafaha-manao mety avy Milan Bergamo. Miaraka amin'ny fanampianay farany, dia faly aho nanamafy fa manana kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 16 manompo toerana 114 any amin'ny firenena 39 avy amin'ny faritra Lombardy, taratry ny fahatokisan'ny rehetra ny fitomboana sy ny fanitarana ny seranam-piaramanidintsika. ”
Hoy koa i Cattaneo: “Manana zotram-piaramanidina vaovao marobe hiaraka aminay ary miaraka amin'ireo zotram-piaramanidina Iraisam-pirenena any Milan amin'ity faran'ny herinandro ity, izao no fotoana mety indrindra hahatongavan'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hiresaka amintsika, ho isan'ny fotoana sy ho avy lehibe eto Milan Bergamo.”